March 2016 - သန်လျင်သားနည်းပညာ
AVG Internet Security 2016 16.51.7496 (x86x64) Multilanguage Incl Key [SadeemPC] (451 MB)
မင်္ဂလာပါ တောင်းထားတဲ့ညီလေးနဲ့ လိုနေတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက်AVG Internet Security 2016 16.51.7496 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။် key လေးပါထည့်ပေးလို...
မင်္ဂလာပါ တောင်းထားတဲ့ညီလေးနဲ့ လိုနေတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက် AVG Internet Security 2016 16.0.7134 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။် key လေးပါထည့်ပေးလို...
မင်္ဂလာပါ Cleaner,Optimizer and Speed Up ဆော့ဝဲတခုဖြစ်တဲ့ Wise Care 365 Pro 3.95 Build 353 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Instructions: ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:54:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ All in One Optimizer ဆော့ဝဲတခုဖြစ်တဲ့ ReviverSoft PC Reviver နောက်ဆုံးထွက်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Instructions: 1. Unpac...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:50:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ Windwos အတွက် All in One Tools ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ jv16 Power Tools နောက်ဆုံးထွက်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Instructions: ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:45:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ Pro,Business,Enterprise Editions (၃)ခုစလုံးပါဝင်တဲ့ CCleaner နောက် ဆုံးထွက်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Instructions 1. Install...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:41:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ Windows အတွက် အပေါ့ပါးဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး Cleaner ဆော့ဝဲ တခုဖြစ်တဲ့ CCleaner နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:37:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ Windows System ကို Optimize and Speed Up လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Avira System Speedup ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. Unpack and install ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:33:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ ကွန်ပြူတာမှာ မကြာခဏ Harm ဖြစ်ခြင်း၊လေးလံခြင်း၊ဖိုင်များဖွင့်မရဖြစ် ဖြစ်ခြင်း၊Copy and Move လုပ်မရခြင်းတို့ကို Repair လုပ်ပေးပြီးစ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:28:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ Windows တိုင်အတွက်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Microsoft Visual C++ ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။2005 မှ 2015 အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ DOWN...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 01:36:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ Photos များအတွက် Photo Viewer,Edit and SlideShow လုပ်နိုင်တဲ့ MAGIX Photo Manager 16 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Install Note......
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 01:30:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ All in One DVDFab Toolsကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။DVD Copy,DVD Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Ripper,Blu-ray to DVD Converter, DVD to Blu...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 01:00:00 No comments:
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 00:38:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ အင်စတောလုပ်ပြီးသား ဆော့ဝဲများကိုမလိုအပ်တဲ့အခါ ပြန်လည်ထုတ်ရန် အတွက် IObit Uninstaller Pro ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Portable ဖြစ် တဲ့အ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 00:32:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ မျှောနေတဲ့ ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် တက်ထားသလောက် နည်းကို အပိုင်း ၂ အနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်၊ စိတ်ဝင်စားတဲ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 09:17:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ သိချင်နေတဲ့ ညီကိုယ်မောင်နှမ များအားလုံးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး Phoptoshop နဲ့ ဗွီနိုင်းဆိုဒ်ဖော်နည်း ကို သိထားသလောက် video အသံဖိုင...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:54:00 No comments:
မင်္ဂလာပါ ပုံပြင်တဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဝဲ Perfect Photo Suite9install လုပ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အင်စတော မလုပ်တက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:47:00 No comments:
Avira System Speedup 2.1.11.1086 + Crack (5.47 Mb)...
AVG PC TuneUp 2016 16.22.1.58906 + Serials (198 Mb...
Sony Vegas Pro 13.0 build 428 (64-bit) (patch KHG)...
Microsoft OFFICE 2010 Pro Plus PRECRACKED (731 Mb)...